फिनल्याण्डमा फट्यांग्रा पिँधेर पाउरोटी उत्पादन,खानेहरुको तछाडमछाड ! « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
फिनल्याण्डमा फट्यांग्रा पिँधेर पाउरोटी उत्पादन,खानेहरुको तछाडमछाड !
एजेन्सी / हामी अलिकती मात्र ढुँसी परेको पाउरोटी किन्न पनि हिचकिचाउछौं । तर फिनल्याण्डमा भने फट्यांग्रा पिठोबाट तयार गरिने पाउरोटी किन्नका लागि मानिसहरुको तछाडमछाड हुने गर्दछ ।
फिनल्याण्डको एक खाद्य कम्पनी फेजर बेकरीले पिठोमा सुख्खा फट्यांग्रा पिँधेर बनाइएको पिठोबाट खाने पाउरोटी उत्पादन गर्ने गरेको छ । फट्यांग्रा मिसाएको पिठो यो कम्पनीले नेदरल्याण्डबाट आयात गर्ने गर्दछ ।
फिनल्याण्डमा खानामा प्रयोग हुने किरा फट्याङ्ग्रा बिक्रिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, फेजर नामक बेकरीले बाहिरबाट पिठो आयात गरी यस्तो फट्यांग्रे पाउरोटी बनाएर बेच्ने गरेको छ । बेकरीका सिइओका अनुसार यो पाउरोटी निकै स्वादिष्ट हुनुका साथै पोषिलो पनिे छ ।
दुलहीले लगाइन् डिजाइनर मास्क, चौतर्फी चर्चा
संसारभरी फैलिसकेको कोरोनाभाइरसका कारण थुप्रै विवाह रोकिएका छन् । तर आजकाल भारतको असममा भएको एउटा
चीनमा बनाइदै गरेको कोरोनाबिरुद्धको भ्याक्सिन यही बर्षको अन्त्यसम्ममा तयार हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकारी
संयुक्तराज्य अमेरिकाका दर्जनौं शहरहरूमा शुक्रबार हिंसा भड्किएसँगै रक्षा मन्त्रालयले मिनियापोलिस राज्यमा सेना परिचालन गर्नेगरी सेनालाई